SAMMUYYAA HABASHAA BARDHIBBEE 21-FFAA KEESSAA – Welcome to bilisummaa
SAMMUYYAA HABASHAA BARDHIBBEE 21-FFAA KEESSAA
9) Harra nuti Oromoonni bineensummaa fi bisaambisummaa mootummaa Habashaa kan durii fi kan ammaa baqachuun garaa waaqa jalatti akka urjii faffacaanee jirra. Kunoo, ardiiwwan (“continents“) ilmoon namaa keessa qubatee jiru jahan keessatti argamna. Ardii Afrikaa teenyaa kana keessayyuu Kaayiroo irraa hamma Keptaawon-itti, Daakaar irraa hamma Maqadisoo-tti faffacaanee muldhanna. Ardiin xiqqattiin sun Awustiraaliyaa-nillee, biyyi xiqqashoon sun Ayerlaandaa-nillee namummaan nu simatanii akka ilmoo namaatti nu ilaalaa jiru. Habashoonni biyyuma keenya keessatti, dacheedhuma teenya irratti bakka ilmaan bineessatti gadi nu buusanillee, biyyoota itti-baqannegara daran irra caalan keessa akkuma ilmoo namaatti jiraanna. Dhalawwan Oromoo dubartii-dhiirri gariin qurxummii nama-nyaataa, shaarkiin liqimfamanii hafanillee, kaan adaala Sahaaraa faa keessatti cirrachaan awwaalamanillee akkuma Waaqni ganamumaan Oromoo eebbise sanitti bakka deemne maratti wal-horree, hammi tokko ijoollee ijoollee teenyaa-llee agarree jirra. Badhaadhina Waaqni nuuf kenne kana gara badhaadhina uummataa fi biyya keenyaatti jijjiiruuf ka’uu qabna. Bakka jirru maratti akka lamii (ambasaaddara) Oromiyaatti oflaaluun uummataa fi biyya teenya, Oromiyaa beeksifachuu qabna. Gandi keessa jiraannu, manneenii fi unbarsiitiiwwan itti-barannu, bakkoonni itti-hojjannu cufti iddoolee waayee Oromoo fi Oromiyaa itti-beeksifannu tahuu qabu. “Eessaayyi dhufte?”, isa jedhamu yommuu gaafatamnu “Oromiyaa irraayyi” jechuu qabna! Sanumaan biyyaa fi saba keenya barsiifachaa adeemna. Kakuu dha; laguu dha; hoola; hooda: Toopphiyaan yoo waayee Oromoo fi Oromiyaa ibsuuf tahe malee, akka biyya teenyaatti hin himamtu! Toopphiyaan tun akkuma sammuu Dhaloota Qubee keessaa haqamtee calaate san sammuu keenya keessayyiis haqamtee calawuu qabdi! Bakki ishiif malu muuziyema malee, sammuu keenyaa miti.
11) Duula hamaa kunoo amma ginni-bittee Habashaa fi muummiyyeewwan Amaaraa nu irraatti oofaa jiran kana, isa obboo Jawaari fi Aljaziiraa irratti oofaa jiran kana irree tokkoon dura dhaabannee ofirraa faccisuu qabna. Erge isaanuu fidanii Aljaziiraa “keenya” bira dabarree, isa akka fakkeenyaatti fudhannee: BBC, CNN, VOA, DW (Voice of Germany) faatti iyyachuutu nurraa eegama. Luka koo, dugda koo jechuu dhiifnee olka’uun mataa olqabannee addunyaatti iyyachuu fi uummatoota Laga Omoofis iyya dabarsuu qabna. Oromummaan namummaa dhaa; namummaanis Oromummaa dhaa karaa kanaanis Oromummaa fi namummaa keenya haa cimsannu! Biyyoota keessa jirruu fi isaan kaanis jaarmolee namoomaa, gareewwan (paartiiwwan) garagaraa, mootummoota garagaraa, jaarmolee addunyaa fi ardiiwwanii: AI, Human Rights Watch, Eu, Au, UNO, UNESCO faatti waan uummata keenya fi uummatoota Laga Omoo irratti mootummaa Habashaatiin adeemsifamaa jiru itti-himachuu fi itti-iyyachuu qabna. Isaan nu hin dhagayan jenneetoo nuffinee dhiisuu hin qabnu. Hamma gurri isaan dhukkubuuttillee itti-iyyannee dhageessisiifachuu-tu nurraa eegama!
Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kunoo kanaa olitti yaadan kana irratti qabu hamma tokko lafa kaayeen jira. Anis, atis, innis (ishiinis), hayyee nuti marti akkka amma deemaa jirru kanatti itti-fufuu hin qabnu. Of-geeddaruu qabna. Biyya teenya harmee Oromiyaa, uummata keenya abbee Oromootiif jecha of-geeddarree waltahuun gara fuulduraatti tarkaanfachuutu dirqama. Dirqamni kun dirqama seenaan nu irratti dhiisee fi dirqama dhalootaa-ti! Dirqama kana eessattuu dhokannee jalaa miliquu hin dandeenyu. Kanaaf, waltahuun alaa-manaa ijaaramnee wal-ijaarree, karaa maraan hindhannee wal-hidhachiifnee, karaa maraan tokkoomnee waltokkoomsinee harqoota gabrummaa Habashaa of-irraayyis, wal-irraayyis caccabsinee haa darbannu! Akkuma jagnichi keenya Jaarraa Abbaa Gadaa jedhe san, bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa “akka du’aa waan ooluu mitii” mee haa jabaannu!
Previous Call for Peaceful Protest by all Oromos in Washington, D.C.
Next Nazaret dabra ziyon Addis ababa